အလုပ်ရှာစဉ် လိုက်နာလုပ်ဆောင်သင့်သည့် အချက် ၄ ချက် | MyanmarJobsDB
Posted by MyanmarJobsDB | February 27, 2013 | Job Search
1. စောစောထပြီး ၀ီရိယရှိကြစို့
အလုပ်အကိုင်အသစ်များကို တွေ့လျှင်တွေ့ခြင်း Application Form ဖြည့်၍လျှောက်ပါက သင်၏ CV ကို အလုပ်ရှင်မှ ဖတ်ရှုမည့် အခွင့်အလမ်းပိုမိုများပြားပါသည်။ နောင်မှ လျှောက်မည်၊ မနက်ဖြန်မှလျှောက်မည်ဟု စဉ်းစားမနေပဲ အလုပ်အသစ်ပေါ်လျှင်ပေါ်ခြင်း CV ပို့ရန် မနှေးပါနဲ့။
2. အလုပ်နေရာလွတ်မတွေ့သေးလျှင်ပင် အစဉ် ကြိုးစားနေခြင်း
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်သည့် အလုပ်၊ ကုမ္ဗဏီတွင် လက်ရှိဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်များ မရှိသေးသော်လည်း အားမငယ်ပါနဲ့။ သင်လုပ်ကိုင်လိုသည့် လုပ်ငန်းဌာန အကြောင်းကို မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊ သတင်းစာဂျာနယ်များ မှတစ်ဆင့် အချိန်ပေး၍ လေ့လာပါ။ ယခုခေတ်စားလာသည့် အင်တာနက်၊ Facebook ၊ LinkedIn အစရှိသည့် လူမှုကွန်ယက်များဖြင့်လည်းကောင်း ယင်းကုမ္ဗဏီပါဝင်သည့် ကုန်စည်ပြပွဲများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများမှလည်းကောင်း ကုမ္ဗဏီရှိဝန်ထမ်းများနဲ့ ချိတ်ဆက် မိတ်ဖွဲ့ထားသင့်ပေသည်။ ထိုမှသာ အလုပ်အခွင့်အလမ်းအသစ်ပေါ်လျှင်ပေါ်ခြင်း ဦးစွာသိရှိနိုင်မည် လျှောက်ထားနိုင်မည်၊ အလုပ်ရရန် မိတ်ဆွေများထံမှ ထောက်ခံချက်ရနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
3. Ready-Made တွေချည်း မသုံးပါနဲ့
အလုပ်လျှောက်တိုင်း သင်၏လက်ထဲရှိ တစ်ခုတည်းသော CV၊ တစ်ခုတည်းသော အပ်ကြောင်းထပ်နေသည့် Cover Letter ကို တင်နေမည်ဆိုလျှင် ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပါ။ အလုပ်အသစ်တစ်ခုလျှောက်တိုင်း၊ ရာထူးအသစ်တစ်ခုလျှောက်တိုင်း၊ အဆိုပါ ကုမ္ဗဏီ အဆိုပါ ရာထူးမှ လိုအပ်သည့် ၀န်ထမ်းလိုအပ်ချက်များကို သင်ဘယ်လို ဖြည့်စွက်ကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုသည့် မေးခွန်းကိုဖြေရန်အရေးကြီးဆုံးပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်တွင်ရှိသော များစွာသော Skills, Qualifications, Honors, Experiences များကို CV ပေါ်တွင် အကုန်ချမရေးဘဲ အရေးကြီးသည့် Skill sets၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ လျှောက်ထားလိုသည့် အလုပ်မှလိုအပ်နေသည့် အချက်များနဲ့ ကိုက်ညီသည်များကိုသာ ထည့်သွင်းရေးသားသင့်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ Cover Letter ကိုလည်း လျှောက်သည့်အလုပ်ပေါ်လိုက်၍ အမြဲပြင်ဆင်နေသင့်သည်။ ကုမ္ဗဏီတစ်ခုသို့ Cover Letter လိပ်မူရာတွင် ကုမ္ဗဏီကြီးဖြစ်လို့၊ ၀န်ထမ်းတွေအပေါ်ကောင်းမွန်လို့၊ ဂုဏ်ရှိလို့ အလုပ် လျှောက်ပါသည် စသည့် လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်သည့် ၀ါကျများချည်းသာ မသုံးဘဲ သင်၏ကိုယ်ပိုင် သုံးသပ်ချက်၊ ထိုအလုပ်နဲ့ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများကို ထည့်သွင်းသင့်သည်။ ဥပမာ – သင်သည် ဘဏ်လုပ်ငန်းတစ်ခုသို့ အလုပ်လျှောက်သည်ဆိုပါစို့။ Cover Letter ထဲတွင် ရေးသားသင့်သည်မှာ ဘဏ်၏ မည်သည့်ကဏ္ဍကို မည်သို့ကြောင့် စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း ဘဏ်မှ ခေါ်ယူသည့် အလုပ်နှင့် အလားတူ အလုပ်မျိုးကို သင်ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ သို့အတွက်ကြောင့် ယခုအလုပ်တွင်လည်း မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြသနိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
CV ရေးဖို့ အချိန်ပိုယူရမည်ဖြစ်၍ စိတ်မညစ်ပါနဲ့၊ ရလာမည့် ရလဒ်က သင့်ကိုများစွာသော ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်ပေလိမ့်မည်။
4. Follow-up လုပ်ရန် မမေ့ရန်
အလုပ်လျှောက်ပြီး ရက်အနည်းငယ်ကြာသည့်တိုင် အကြောင်းပြန်မကြားလျှင် ထိုအလုပ်သို့ အီးမေးလ် စသည်ဖြင့် ဆက်သွယ်ကာ အခြေအနေမေးမြန်းသင့်သည်။ ယင်းသို့ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင်၏ အလုပ်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုကိုပြသရာရောက်သည့်အပြင် အလုပ်ရှင်ကိုလည်း သင်၏ လျှောက်လွှာကို မမေ့လျောအောင် ပြန်သတိပေးရာလည်း မြောက်ပေသည်။ သို့သော် အချို့အလုပ်ရှင်များသည် ဤကဲ့သို့ ဆက်သွယ်မှုများကို မပြုလုပ်ရန် ကြိုတင်ဖော်ပြထားလေ့ရှိသည်။ အဆိုပါအခြေအနေများတွင်မူ ယင်းကဲ့သို့ ဆက်သွယ်နှောင့်ယှက်မှုမပြုသင့်ပေ။ အလားတူစွာ အင်တာဗျူးရ၍ အင်တာဗျူးသွားပြီး တစ်ရက်နှစ်ရက် အကြာတွင်လည်း အလုပ်ရှင်ထံသို့ ကျေးဇူးတင်လွှာ (အချိန်ပေး၍ အင်တာဗျူးခေါ်သည့်အတွက်) တစ်စောင် ပေးပို့သင့်သည်။ ထိုစာထဲတွင်လည်း သင်၏အလုပ်အပေါ် မည်မျှလောက် စိတ်ဝင်စားသည့်အချက်ကို ထပ်မံဖော်ပြသင့်ပြီး နောက်ဆက်လုပ်ဆောင်ရမည့် စာမေးပွဲများ၊ အင်တာဗျူးများ၊ အဆင့်များကို မေးမြန်းသင့်သည်။
အထက်ပါ အချက် ၄ ချက်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် သိမှတ်ထားသင့်သော အချက်များဖြစ်သည်။ မည်သည့်အလုပ်ရှာရာတွင်မဆို အသုံးဝင်ပါသည်။ နောင်တွင် ကျွန်တော်တို့ MyanmarJobsDB မှ အခါအားလျော်စွာ Job Search Tips များလည်း ဆက်လက် ရေးသား ထုတ်ဝေသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Reference: Chelsea Gladden / Mashable
3 Responses to “အလုပ်ရှာစဉ် လိုက်နာလုပ်ဆောင်သင့်သည့် အချက် ၄ ချက်”
Comment made by ‌အေးမင်းပိုင်‌ on Sep 30th 2013 at 1:31 pm: Log in to Reply
Comment made by nanwarwar on Nov 13th 2013 at 1:30 pm: Log in to Reply
Myanmar Job DB ကို ကြည့်ရတာ ဗဟုသုတ အများကြီး ရပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ…
Comment made by K Khine on Dec 6th 2013 at 3:10 pm: Log in to Reply
အကြံဥာဏ်ကောင်းများ ဒီထက်မကပေးစွမ်းနိူင်ပါစေ ကျေးဇူးတင်လျက်